- - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-媛妈
Indlu enelanga egcwele uhlaza, enezitezi ezingaphezulu neziphansi, enengadi encane enezitshalo nezinhlanzi ezincane, okungaba indawo yokuhlala yomndeni omkhulu noma iqembu labangane.
“Igumbi ngalinye likhanya kakhulu ngezinsuku libalele. Kusenokukhanya kwelanga okufudumele egumbini lelanga elikhanya phezu kombhede we-tatami. Bheka ethafeni naphambi kwamafasitela amakhulu engilazi asuka phansi kuya ophahleni, noma hlala futhi uphuze inkomishi itiye izitshalo engadini encane. Libuye mnandi kakhulu.”
“Igumbi ngalinye likhanya kakhulu ngezinsuku libalele. Kusenokukhanya kwelanga okufudumele egumbini lelanga elikhanya phezu kombhede we-tatami. Bheka…
– 媛妈, umbungazi wakho
Umbhede olala umuntu oyedwa, umbhede we-queen
Umbhede olala umuntu oyedwa, Umbhede omkhulu
4.91 (izibuyekezo ezingu-22)
Kuningi okuzungezwe ukudla okumnandi, umgwaqo awumkhulu, futhi baningi abantu abangadla ngaphandle.Ungahamba ngokuthanda kwakho.Kunendawo yokudlela yamabhodwe ashisayo enezitebhisi ezintathu kanye nendawo yokudlela yaseSichuan enezitebhisi ezinhlanu. . U-Yuanma uphakamise ukuthi enkathini ebandayo noma eshisayo, ungakwazi ukuhambahamba emphakathini futhi uhambe macala onke.